Ururka Al-Shabaab oo la sheegay inuu malaayiin dollar ka sameeyo jidgoyooyinka… – Hagaag.com
Ururka Al-Shabaab oo la sheegay inuu malaayiin dollar ka sameeyo jidgoyooyinka…
Ururka Al-shabaab ayaa la sheegay in ay malaayiin dollar ka sameeyaan lacagaha deeqaha ah ee la siiyo dalka Soomaaliya iyo gargaarka loogu talagalay dadka Soomaaliyeed ee dhibaateysan.
Dadka ka soo barakacay guryahooda oo ku nool magaalada Baydhabo ayaa Qaramada Midoobay waxaa ay siisaa lacag gaareysa $80 illaa $90 kuwaasoo kaarar loogu shubo si ay cunto ugu iibsadaan.
Hasse ahaatee warbixinta ayaa lagu sheegay in ganacsatada keeneysa cuntada ay jidgooyooyin u dhigtaan Al-Shabaab iyagoo ka qaada loorkii cunto ah $3 taasoo marka la isku daro ay kumanaan dollar maalin walba ay ka helaan Al-Shabaab.
Qaramada Midoobay ayaa ku qiyaastay lacagta ka soo gasha Al-Shabaab bar koontarool oo ay ku leedahay gobolka Bay ay gaareyso shan kun oo dollar maalin walba.
Sidoo kale warbixintan ayaa lagu sheegay in Al-Shabaab ay ka soo gasho lacago faro badan ganacsatada iyagoo ka qaada Zako marwalba, taleefishinka ayaa meel gaar ah ku wareystey dagaalame hore ugaga tirsanaa Al-Shababa kaasoo muddo sagaal sano ah ururinayay lacagaha zakawaatka loo yaqaan.